I-anyanisi ikhasi likashukela, ukwelashwa nge-decoction > Ukwelashwa okuhlukile
Isifo sikashukela anyanisi husk zokupheka
Le ndlela eyingqayizivele ayidingi izindleko ezikhethekile ezibonakalayo futhi kulula ukuyilungisa ekhaya. Idlanzana lamawks liyagezwa futhi lithulule ngoketshezi ngesilinganiso esingu-1: 10. Simmer imizuzu engu-15. Kwamukelwe decoction of anyanisi ikhasi likashukela ubunzima bese udla isigamu sendebe kabili ngosuku ngemuva kokudla. I-decoction igcizelela umfutho wegazi. Isetshenziselwa izifo ezihambisana nesifo sikashukela, izifo zenhliziyo ezi-coronary kanye ne-angina pectoris.
Ukwenza itiye le-anyanisi husk
I-anyanisi husk itiye kungenye yezindlela ezilula zokulungisa umuthi onciphisa ushukela. Ukuphuza isiphuzo inyanga yonke kunomthelela ekwehlelweni okuqhubekayo koshukela wegazi.
Ngaphezu kokuzinza kwamazinga kashukela, iziguli ziphawula ukuphuculwa komgudu wokugaya ukudla, inkambiso yezinqubo zokugaya ukudla kanye nesimo sesikhumba, izinzipho nezinwele.
Itiye lilungiswa ngale ndlela elandelayo:
Hlambulula isipuni esisodwa se-husk, uthele ku-thermos bese uthela amanzi abilayo (200 ml),
phikelela imizuzu engama-20.
Hlunga itiye ngaphambi kokusebenzisa bese ucindezela ikhekhe. Ukuthuthukisa ukunambitheka, ungangezela ithebhulethi le-sweetener. Phuza isiphuzo esingu-100 ml kaningana ngosuku ngezikhathi ezithile.
Ziyini izinzuzo ze-anyanisi ikhasi?
Ucwaningo lukhombisa ukuthi amandla okuphulukisa ama-husks kusuka ku-anyanisi asesimweni sawo sezinto eziphilayo. Isithako esiyisisekelo esisebenzayo esikhunjeni yinto okuthiwa i-quercetin.
I-Quercetin iyi-antioxidant yemvelo, futhi ukugxila kwayo kumkhiqizo kufinyelela ku-4%. Le ngxenye ibonakala ingumsizi ongabaluleki wemithambo yegazi, ngoba iqinisa izindonga ze-vascular, ibanikeze ukuqina okuqinile nokuqina.
Okuyinkimbinkimbi kuthinta ukuhamba kwegazi emzimbeni. Ngakho-ke, le nto isiza ukuqinisa izindonga zemithambo yegazi kushukela, ngakho-ke, ukusakazwa kwegazi eligcwele kusungulwa.
Into yesibili ebaluleke kakhulu enomphumela wokwelapha iyantengantenga - izakhi zemvelo ezinamandla ezinezinto ze-antiseptic. Kungakho bona, ngisho naku-infusions, ama-decoctions, begcina izindawo zabo zokuphulukisa, bayasebenza ngokumelene ne-pathologies eminingi yapheshana lokuphefumula.
I-anyanisi ikhasi lifaka izakhi ezilandelayo:
I-Carotene, amavithamini ahlukahlukene.
Potassium, iron, phosphorus.
Ezinye izinto zamaminerali.
I-anyanisi ikhasi linezinto eziningi zokwelapha. Ine-expectorant, antioxidant, antispasmodic, restorative and tonic effect. Ngaphezu kwalokho, inokuhlanzwa, i-immunomodulating, ne-diuretic.
Ungayilungisa kanjani kahle i-husk ukuze ingalahli izakhiwo zayo? Okokuqala, okudingeka ukunake: kungcono ukusebenzisa ukuhlanza kusuka ezimpandeni ezitshalwe kusayithi lakho siqu, noma ukuthenga ngqo kubalimi.
Njenganoma yisiphi isivuno sezimpande, u-anyanisi, ositshalwe ngokufakwa kwamakhemikhali ahlukahlukene, ama-accelerator okukhula nokunye, aqongelela ama-nitrate nezinye izinto eziyingozi emzimbeni womuntu.
Ukulungiselela i-anyanisi ngomuthi:
Misa u-anyanisi ngentambo.
Susa ngokucophelela wonke ama-flakes.
Gcina endaweni enomoya omncane, onomswakama ophansi kahle.
Kuyaqapheleka ukuthi ngaphambi kokusebenzisa i-husk, kufanele igezwe ngaphansi kwamanzi ampompo. Uma i-flake inokubukeka okungafanele ngezibonakaliso zokuwohloka noma izifo, khona-ke kufanele ilahlwe, ngeke kulungele ukulungiswa Umuthi.
I-anyanisi husk zokupheka
Kwelinye ikhambi, kunezindlela eziningi zokulungiselela i-anyanisi ikhasi. Zonke izindlela zokupheka azinabo ubunzima ekuphekeni, ngakho-ke wonke umuntu angapheka ekhaya.
Indlela elula kunazo zonke enciphisa ushukela wegazi itiye ngokufakwa kwama-anyanisi amakhasi. Zonke izinto zokwelapha kulesi siphuzo azilahli amandla. Ukubuyekezwa kweziguli kukhombisa ukuthi uma uphuza isiphuzo sokuphulukisa nsuku zonke inyanga eyodwa, khona-ke kukhona ukwehla kwe-glucose emzimbeni.
Ngaphezu kwalokho, iziguli ziyaqaphela ukuthi isimo sesikhumba, izinwele nezinzipho siyathuthuka, ukusebenza kwamapheshana wokugaya nokudla esiswini, umthamo womsebenzi uyanda, futhi namandla omzimba ayakhuphuka.
Ukwehlisa ushukela wegazi, itiye lilungiswa kanje:
Udinga isipuni esisodwa somkhiqizo, okumele ugezwe ngokuphelele ngaphansi kwamanzi ampompo.
Thumela i-anyanisi ikhasi kwi-teapot, engeza u-200 ml we-kefir, uvale isivalo.
Songa ithawula elifudumele noma okunye okuphathekayo, shiya ukugcizelela imizuzu engama-20.
Ngemuva kokuthi udinga ukuhlunga isiphuzo, engeza inani elincanyana loju lwemvelo noma i-sweetener, nesiphuzo.
Kunconywa ukuthi uphuze izinkomishi eziningana ngosuku ngezikhathi ezithile. Kuyaqapheleka ukuthi yize uju lungangezelelwa itiye, kodwa noma kunjalo, alunconywa. Iqiniso ngukuthi kuketshezi olushisayo luphulukana nazo zonke izakhiwo zalo zemvelo ezizuzisayo.
Ukufakwa kwe-anyanisi husk sikashukela kulungiselelwe kanjena:
Thatha i-anyanisi ikhasi, ugaye esimweni se-powdery. Le nqubo ingenziwa kusetshenziswa isigaxa sekofi.
Ngemuva kwalokho udinga ukuthatha izipuni ezimbili zefulawa bese ufaka i-100 ml yotshwala kuzo (ingashintshwa ne-vodka enhle).
Vala izitsha, ubeke endaweni emnyama, gcizelela isonto elilodwa. Ngemuva komuthi owudinga ukuwuthola, uwuhlwayeze.
Kuyadingeka ukuthatha kathathu ngosuku imizuzu engama-30 ngaphambi kokudla.
Umthamo ngamaconsi angama-20 wesidakamizwa, ahlanganiswe ne-olive noma amanye uwoyela.
Isikhathi sokwelashwa okunjalo okungenani amaviki amabili. Ukuhlanganisa umphumela, kuzodingeka uphuze inkambo yesibili, eqala ezinsukwini eziyi-10 ngemuva kweyokuqala. Ukubuyekezwa kweziguli kukhombisa ukuthi kusukela ekusebenziseni umuthi onjalo, ushukela uqala ukuncipha kancane, bese uvama ezingeni lokuqondiwe.
Kuyaqapheleka ukuthi izindlela ezinjalo zinokuphikisana. Ama-hoods avela kunoma iyiphi ingxenye ye-anyanisi, i-anyanisi ikhasi ayaphikiswa lapho kukhona ukungahambisani nemikhiqizo enjalo.
Kumele kukhunjulwe ukuthi i-tincture nayo inengxenye yotshwala, efakwa ku-pathologies elandelayo: isilonda esiswini, i-gastritis, i-urolithiasis, izinqubo zokuvuvukala ezinsweni, ikakhulukazi ngesikhathi sokugcwala.
Ngenxa yokuthi umkhiqizo uqukethe ukugcwala okukhulu kwe-rutin, akunconyelwe ukuthi usetshenziswe ngabantu abane-coagulability ephezulu yegazi.
Ungasebenzisi ukwelashwa kwe-onion husk ngesikhathi sokukhulelwa noma ukuncelisa.
Izindlela zokupheka ezisebenzayo: ukugcoba nama-decoction
Izici eziphila ngokusebenza kwe-anyanisi ikhasi ziya nomthelela ekwehlekeni kokuxineka koshukela egazini ku-mellitus yesifo sikashukela. Ukubuyekezwa kukhombisa ukuthi imali esekelwe esikalini sika-anyanisi iyasebenza impela, kepha ukuze uthole umphumela oyifunayo, kufanele uthole inkambo yokwelashwa ekhaya.
I-decoction ye-anyanisi ikhasi ilungiswa ngokushesha futhi kalula, ngeke idinge amakhono akhethekile. Ukuze ulungiselele umhluzi uzodinga idlanzana elincane lama-anyanisi. Kufanele zigezwe ngokuphelele ngaphansi kwamanzi abandayo, zihlolwe ukubola.
Bese ubeka esitsheni, engeza inani elincane lamanzi, bese ubeka umlilo omncane. Letha kumathumba, ubilise imizuzu emibili, bese ucisha ukushisa. Akuyeke kube isikhashana, ngemuva kokuhlunga.
Udinga ukuyithatha kaningana ngosuku. Okunye ukubuyekezwa kuncoma ukuphuza i-100 ml kathathu ngosuku; ezinye iziguli zithi kwanele ukuthatha kabili ngosuku. Noma kunjalo, uma isiguli singawoni kulo mkhiqizo, ukusetshenziswa kwawo ngokweqile ngeke kumlimaze.
Ngokuphikisana nesizinda sikashukela i-mellitus, amandla okuvuselela isikhumba ancishiswe kakhulu. Kwenzeka kaningi ukuthi ukuqhekeka okuncane emilenzeni onesifo sikashukela kubangele izinhlungu ezingabekezeleleki, kuyilapho kungapholi isikhathi eside.
Inqubo yokubuyisela isikhumba ingasheshiswa ngokulungiselela i-oils esekwe kumakhasi anyanisi. Ukulungiselela, kufanele wenze izinyathelo ezilandelayo:
Hlambulula kahle onke ama-husks ngaphansi kwamanzi, avumele ukuba ome.
Okulandelayo, izandla ezimbili ezinkulu ze-husk zichotshozwa zibe yimpuphu.
Ngemuva kwalolu phawu kuxutshaniswe nanoma yiluphi ukhilimu ongathathi hlangothi noma i-petroleum jelly. Uma kungenazimali ezinjalo endlini, amafutha ajwayelekile afanelekile.
Gcina i-oyili endaweni emnyama ngeqondo lokushisa elipholile.
Kuvunyelwe ukusebenzisa amafutha okugcoba amanxeba angapholi, ama-dermatitis kanye ne-fungal pathologies. Futhi ukuqeda amathumba, warts kanye nezimbila.
Akunamikhawulo yesikhathi ngesikhathi sokusebenzisa.
I-anyanisi Yesifo Sikashukela
I-anyanisi aqukethe amavithamini amaningi kanye namaminerali aqinisa ngokushesha futhi ngempumelelo amasosha omzimba womuntu, aqede izifo, alwe nesifo sikashukela futhi asize ukwehlisa ushukela wegazi.
Odokotela batusa ukudla i-anyanisi eluhlaza ekwelapheni isifo sikashukela. Kodwa-ke, akuzona zonke iziguli ezangena “ezinhlangeni” ezinje. Ngakho-ke, kunezinye izindlela ezisetshenziselwa u-anyanisi, ngokwesibonelo, umkhiqizo obhakwe.
Ingasetshenziswa ngaphandle kwesigaba sesifo nama-pathologies ahambisanayo, kuyilapho kungekho mkhawulo ngobungako. Ngokuphambene nalokho, uma ufaka u-anyanisi obhakwe ekudleni kwakho kwansuku zonke, khona-ke ngesikhathi esifushane, unganciphisa kakhulu ushukela.
Ukupheka u-anyanisi obhakwe kulula kakhulu: thatha u-anyanisi bese ugeza, awudingi ukususa i-husk. Thumela ukubhaka kuhhavini kuze kuphekwe ngokuphelele (kungahlolwa ngommese, lapho ummese ungena kalula ku-anyanisi, khona-ke usukulungele).
Ngokuse-anyanisi, ungalungiselela i-tincture: thatha u-anyanisi amabili amakhulu, u-chop, uthele u-200 ml we-kefir, ushiye amahora angama-24. Thatha izipuni ezimbili kathathu ngosuku ngemuva kokudla. Inkambo yokwelashwa iyizinsuku eziyi-15-20. Ekuphetheni, ungamema umfundi ukuthi ajwayele ukuthi ulwandle lwaselwandlekazi lungasiza kanjani kwisifo sikashukela sohlobo 2.
I-anyanisi ikhasi liyindlela ephumelelayo futhi engabizi yokwelapha isifo "esimnandi". Izinzuzo zale ndlela ukungabikho kwemiphumela emibi kanye nohlu oluncane lwe-contraindication. Ividiyo ekulesi sihloko izoqhubeka nokwelashwa kwama-anyanisi husks.
I-anyanisi ikhasi likashukela, ukwelashwa nge-decoction
Izici zokupholisa anyanisi kudala zaziwa. Hlakulela u-anyanisi iminyaka engaphezu kuka-5000. Kuningi okubhaliwe mayelana nokuphulukiswa kwaso. Kulesi simo, ungasebenzisa zonke izakhi ze-anyanisi: amahlumela aluhlaza, u-anyanisi kanye ne-husk. Kepha bambalwa abantu abakwazi lokho anyanisi ikhasi likashukela - Ithuluzi eliwusizo.
I-Quercetin, i-antioxidant ne-bioflavonoid ibonwa njengezinto eziyinhloko zemvelo zokwelapha. Lezi zingxube zingabasizi abahle emithanjeni yegazi ukuze balondoloze ukuqina. Owesibili ngezimpawu zokwelapha ziyizinto eziguqukayo, ezingama-antiseptics wemvelo. I-anyanisi ikhasi lisetshenziselwa ama-infusions, ama-decoctions kanye nezinto ezikhishwe.
Iresiphi kaKonstantin Makarov ngesifo sikashukela
Ukwelashwa kwe-anyanisi husk sikashukela
Indlela elula yokwelapha lesi sifo izoba itiye. Akuvunwa ukusetshenziswa esikhathini esizayo, isikhathi esingamahora ayisithupha. Lokhu, 1 tbsp. l akhiqizwe ngamanzi abilayo, ngevolumu yengilazi eyi-1. Faka imizuzu engama-20-25. Bese ihlungwa futhi idliwe. Ungangeza ngezipuni uju.
Kungani husk ilusizo? Ingxenye eyinhloko yesibabule noma i-allicin yehlisa amazinga kashukela egazi kancane kodwa ngendlela efanele.
I-anyanisi ikhasi liqukethe izakhi zomzimba eziningi kune-anyanisi uqobo. Lokhu:
amavithamini PP, B, C, E,
okuguquguqukayo kanye nama-antioxidants,
ama-organic acid nosawoti.
I-4% quercetin iyisisekelo se-antioxidant. Le ngxenye ikhulisa ithoni yemikhumbi ehlushwa kakhulu yisifo sesifo sikashukela.
Amadoda amaningi, eseqe umnyombo weminyaka engama-50, aqala ukuba nezinkinga ze-prostate. Lesi sifo singabonakala ngokuchama kaningi.
"Ukungcola" okuvela kule imifino evuthayo kuzosiza ukuqeda ukugula okunjenge-adenoma. Empini yokulwa nalesi sifo, umenzeli wokuqala osizayo, ikakhulukazi ngesimo saso sokuqala, yi-decoction.
Ilungiselelwe ngokuya ngale ndlela yokupheka ehlolwe kahle: thatha imfucuza ye-anyanisi - 4 tbsp. wezipuni, hlambulula, uthele amanzi abilayo - 600 ml, ubilise imizuzu emi-5, ugcizelele ihora elilodwa.
Yidla ingilazi eyi-1/3 ngaphambi kokudla kathathu ngosuku amasonto amabili, bese uthatha ikhefu lamasonto amabili, bese wenza inqubo futhi.
Enye indlela yokupheka i-prostate. Thatha 2 tbsp. l hazel negobolondo, uthele izingilazi ezimbili zamanzi, ubilise imizuzu emi-5. Ukwemukelwa ngaphambi kokudla ngekota yengilazi izikhathi ezine ngosuku. Isifundo singamaviki ama-2.
Indoda eyodwa yayesaba kakhulu ukuhlinzwa nge-adenoma, yaqala ukuphuza umhluzi wokupholisa. Uma uyamkholelwa, khona-ke ngeviki lesibili uzizwe ekhululeke. Ungazama ukwengeza ekwelashweni okunqunywe ngudokotela.
Le iresiphi elandelayo ifanelwe kuphela ukubuyekezwa okuhle: i-0.5 l yamanzi ithathwa ingilazi ngayinye yezinto ezingavuthiwe, ebilisiwe imizuzu engu-6, bese kuthi ukuma imizuzu engu-40, bese ufaka uju - 3 tbsp. l Phuza lokhu kungeniswa izinsuku eziyisihlanu engxenyeni yengilazi izikhathi ezintathu ngosuku.
Bese kwenziwa ukuphumula kwezinsuku ezi-5, emva kwalokho ukugoqwa kosawoti kudinga ukwenziwa. Ukuze wenze lokhu, thatha u-200 amagremu kasawoti kumalitha ama-2 amanzi, uchithe kuwo, uncibilishe ithawula, uzisonge, uzisonge, ubambe amahora amabili. Bese uphinda inkambo ephelele kusukela ekuqaleni.
I-anyanisi husk tincture
Ukuze upheke, udinga ama-flakes omile.
Gaya umkhiqizo ku-grinder yekhofi. Kuzodingeka izipuni ezi-2 zikafulawa.
Beka i-husk emhlabathini esitsheni sengilazi bese ufaka utshwala / i-vodka kuyo. Uzodinga i-100 ml.
Vala imbiza ngesivalo bese ushiya isonto lonke endaweni emnyama.
Bese uhlunga umkhiqizo.
Phuza umuthi kathathu ngosuku isigamu sehora ngaphambi kokudla okuyinhloko.
Umthamo owodwa ngamaconsi angama-20. I-tincture yotshwala kufanele ihlanganiswe nenani elincane lamafutha zemifino, njenge-olive. Isikhathi sokwelashwa sinamaviki amabili. Ukuhlanganisa umphumela, ukwelashwa kufanele kuphindwe ezinsukwini eziyi-10 ngemuva kokuphela kwenkambo yokuqala. Ukunciphisa ushukela wegazi kwenzeka kancane kancane, ngokuqina okwengeziwe kwamazinga kashukela.
ukungahambi kahle ku-anyanisi,
Noma iyiphi ifomathi ye-gastritis,
ukuvuvukala kohlelo lwezinso
I-anyanisi ikhasi liqukethe inqubo ejwayelekile, ngakho-ke, abantu abane-high blood coagulation kufanele benqabe ukwelashwa ngezidakamizwa ezisuselwa kukho.
Ungabhaka kanjani u-anyanisi weshukela
Udokotela kuphela obheka isiguli onganquma isikhathi sokuzila ukudla kuye siqu, ukuze le nqubo ilethe umphumela wokwelapha, futhi ungasibi isimo sesiguli. Imvamisa ukuzila ukudla okwenziwe emzimbeni kwenziwa esifundweni sezinsuku eziyishumi, ngemuva kwalokho inhlalakahle yesiguli iba ngcono kakhulu.
Ochwepheshe (abadla izitha zokudla kanye ne-endocrinologist) kumele bangagcini nje ngokushintsha indlela odla ngayo, kodwa futhi batshele isiguli ukuthi siphuma kanjani kuyo. Kunconywa ukuthi uqale ukuzila ukudla usebenzisa uketshezi (okunomsoco). Kungafaka:
Noma yiluphi ujusi ovela kwimifino, kodwa luhlanjululwe ngamanzi,
Ijusi elisanda kufakwa kusuka kumifino engafakwanga usizi,
Ngezinsuku zokuqala ezingama-2-3 zokuzila ukudla, kunconyelwa ukukhipha usawoti kanye nakho konke ukudla okukhona nakho inani elikhulu lamaprotheni ekudleni.Izitsha ezivela kumasaladi, isobho lemifino, ama-walnuts avumela isiguli ukuthi sihlanganise umphumela otholakele ngesikhathi sokuzila ngesimo eside, futhi sisebenza njenge-prophylaxis enhle yomonakalo ezinyaweni, obizwa ngokuthi "unyawo lwesifo sikashukela."
Isidlo sasemini esigulini esinesifo sikashukela ngesikhathi sokuzila kufanele sinqunyelwe amahlandla amabili. Kukholelwa ukuthi uma lilincane inani lokudla phakathi nosuku, okuvame kakhulu ukuphuma kwe-insulin egazini. Inani le-insulini elingena emithanjeni yegazi alincike enanini lokudla isiguli esinalo, i.e. akukho ukwanda noma ukuncipha kokusebenza. Ukulamba kusiza ukunciphisa ukusebenza ngokomzimba esigulini, noma kunjalo, ngemuva kokuqedwa kokudla, akudingeki nje kuphela ukubuyisela imithwalo, kodwa futhi ukwandise kakhulu. Isizathu umthwalo umthwalo osiswini semisipha yesiguli, esiza ukunciphisa inani le-insulin.
Kule vidiyo, udokotela ukhuluma kabanzi ngemigomo yokwelashwa kwesifo sikashukela ngokuzila ukudla.
Ukuzila kokuqala kunconyelwa ukuba kwenziwe ngaphansi kokuqondisa kukadokotela esibhedlela. Ukulawula inkambo yesifo ngesikhathi sokudla kufanele kwenziwe yi-dietori, ngokuxilongwa kohlobo 2 lwesifo sikashukela lokhu okuphoqelekile. Okokuzila kokuqala, kuyadingeka ukulungiselela umzimba. Ukuze wenze lokhu ,guqukela ekudleni ukudla okuvela kuphela kwezitshalo ezinsukwini ezingama-2-3, kanye namafutha omnqumo angama-30 g ngosuku. Esigabeni sokulungiselela ngaphambi kokuzila, kufanele kufakwe i-enema, ezosiza ekuhlanzeni umzimba.
Ngosuku lwe-4 noma lwe-6 kusukela esikhathini sokuzila, isiguli singena enkingeni ye-hypoglycemic. Kungenzeka ihambisane nomoya omubi, kepha ngokuhamba kwesikhathi iyanyamalala. Inqubo efanayo ihambisana nokwehla kwezinga lama-ketones egazini. Umsebenzi oyinhloko wokuzila ukudla uwukunciphisa inani le-glucose, wenze izinqubo ezijwayelekile ze-metabolic, ukunciphisa umthwalo kuma-pancreas futhi ususe ngokuphelele zonke izimpawu zesifo sikashukela.
I-anyanisi ingumkhiqizo osiza kakhulu ekulweni nesifo sikashukela. Izici zalo zokuphulukisa zingatholakala ngokuzisebenzisa nganoma iyiphi indlela: eluhlaza, ethosiwe, ebilisiwe noma ebhakwe. Kakhulu isiza ukunciphisa i-anyanisi kashukela obhakwe ngegazi ngenxa yokuqukethwe okuphezulu kwesibabule kulo mkhiqizo. Ivuselela ukukhiqizwa kwe-insulin, futhi iphinde ithuthukise inqubo yokusebenza kwezindlala zokudla. Kunezindlela ezimbili zokwelapha ushukela no-anyanisi.
Inketho 1: I-anyanisi kufanele ihlolwe bese inqunywe kahle. Songa okuqukethwe okuqukethwe embizeni yengilazi bese ufaka amalitha ama-2 amanzi abilayo abilayo kuwo. Le tincture igcinwa esiqandisini amahora angama-24 ngaphambi kokuyisebenzisa. Ngaphambi kokuthi uqale ukudla, thatha imbiza ngemizuzu engama-20 bese ulinganisa ama-tincture esilinganisweni sesithathu senani lengilazi ejwayelekile, engeza isipuni se-acetic acid (uviniga wokudla) kuyo. Lokhu kufanele kwenziwe kathathu usuku lonke. Ngemuva kokuthi umthamo we-liquid esitsheni uzokwehla, kufanele uphinde ugcwalise ngamanzi (amanzi abilayo abolile).
Inketho 2 Le tincture inconyelwe ukusetshenziselwa abantu abadala kuphela! Ingxenye emhlophe ye-leek izodinga i-100 g .. Kufanele inqunywe futhi ifakwe kokuqukethwe yiwayini elibomvu elomile, amalitha ama-2 ngevolumu. Shiya i-tincture izinsuku eziyi-10 endaweni epholile bese ungayithatha. Umthamo olinganiselwe wokuvimbela nokwelashwa ungama-15 g ngemuva kokudla. Phakathi nonyaka, i-tincture ithathwa nsuku zonke izinsuku eziyi-17, khona-ke inqubo iphindwa ngemuva konyaka. Ukwelashwa okunjalo kusiza ukugcina ushukela ojwayelekile.
I-anyanisi ikhasi libuye libe nezindawo ezizuzisayo futhi liyasiza ekulweni nesifo sikashukela. Inani elikhulu lesibabule namavithamini kunganciphisa ushukela wegazi. Ngokuvamile, kusetshenziswa i-decoction ye-anyanisi ikhasi. Ungenza kube lula ekhaya nganoma isiphi isikhathi sonyaka: hlamba futhi ubilise idlanzana elincane lama-onion husks. Phuza, njengengxenye ezimele, noma ngokufakwa kwezinye iziphuzo, njengetiye.
Enye indlela yomhluzi ingaba enye iresiphi: bhaka u-anyanisi esikhunjeni (hhayi nje gazinga, kepha ubhake). Isibiliboco kufanele sidliwe ekuseni ngesisu esingenalutho, siphinda isenzo esinjalo nsuku zonke inyanga. Ngenqubo yale ndlela yokwelashwa, ushukela wegazi wehliselwa isilinganiso esifanele futhi isimo sesiguli siyazinza.
Kule vidiyo ungafunda ngezidakamizwa ezintsha kanye nezindlela ezindala zabantu zokwelapha isifo sikashukela. Qiniseka ukushiya imibuzo neziphakamiso zakho kumazwana ashiwo esihlokweni.
Imvamisa, u-anyanisi obhakwe usetshenziselwa ukwelapha isifo sikashukela sohlobo lwe-2, esibhakwa kuhhavini ngaphandle kokubhoboza isikhumba. Badla ngendlela efudumele, beyikhonkotha, isigamu sehora ngaphambi kokudla nokuphuza.
Ukwelapha isifo sikashukela, kwanele ukudla i-anyanisi eyodwa ebhakwe ngaphambi kokudla kwasekuseni. Kepha uma ufisa, ungakwenza lokhu izikhathi ezi-3 ngosuku, ngaphambi kokudla. Inkambo yokwelashwa okungenani inyanga.
Ungafaka u-anyanisi obhakwe ngalawo abilisiwe. Emanzini abilayo noma ubisi, u-anyanisi othosiwe uyaphonswa bese uphekwa imizuzu engama-20. Kudliwa kufudumele isigamu sehora ngaphambi kokudla.
Amanzi e-anyanisi avela kushukela awanciphisi ushukela wegazi kuphela, kodwa futhi athuthukisa ukugaya, akhiqiza umphumela wokukhanya wokugaya. Ukuze uyilungiselele, u-anyanisi o-3 osikiwe kufanele uthele ngo-400 ml wamanzi abilisiwe afudumele bese egcizelelwa amahora angama-8. Cindezela ukumnika ngokusebenzisa i-cheesecloth, unciphise izinto ezingavuthiwe. Phuza i-100 ml kathathu ngosuku isigamu sehora ngaphambi kokudla.
Ihlise kahle ushukela ukumfaka u-anyanisi kusuka kushukela kuya kwewayini elibomvu elomile. 3 u-anyanisi oqoshiwe uthele i-400 ml ye wayini ebomvu eyomile, shiya izinsuku eziyi-10 esiqandisini. Thatha u-1 tbsp. ngemuva kokudla. Ezinganeni, le ndlela yokupheka ayifanele.
Akusasebenzi kahle futhi anyanisi ikhasi likashukela. I-decoction ye-anyanisi husks ilungiswa ngesilinganiso se-1 tbsp. u-anyanisi osikiwe ku-100 ml wamanzi. Izinto ezingavuthiwe zifakwa esitsheni esingenamuntu noma seglasi, sigcwele amanzi ahlanzekile futhi sishiswe kubhavu wamanzi okungenani imizuzu eyi-10, emva kwalokho sifakwa kwelinye ihora. Thatha i-по yengilazi (50 g) kabili ngosuku isigamu sehora ngaphambi kokudla.
Uma kungekho okubhekelwa kwezinye izifo, ungasebenzisa umuthi onikezwe ngamajusi wemifino ekwelapheni isifo sikashukela sohlobo 2.
Ijusi zilungiswa ngokushesha ngaphambi kokusetshenziswa. Kuzodingeka ujusi we-anyanisi osanda kufakwa, amazambane aluhlaza kanye neklabishi emhlophe. Kuyadingeka ukuwaxuba ngokulingana futhi uphuze isigamu sehora ngaphambi kokudla kwasekuseni. Qala ukuthatha nge-50 ml, kancane kancane ukwandisa inani libe ngu-100 ml.
Kunezindlela eziningi zokulungiselela izitsha kanye ne-infusions yokwelapha kusuka ku-anyanisi oluhlaza, ama-turnips, namaliki. Sinikeza kuphela okusebenzayo kakhulu kubo, ngokuya ngezibuyekezo zabashukela.
I-anyanisi ebilisiwe emanzini ingadliwa njengesitsha esizimele nangendlela yesobho. Isifo sikashukela sivame ukukhetha ukhetho lwesibili.
I-anyanisi isobho ilungiselelwe umane nje nenyama umhluzi noma amanzi. I-anyanisi yengezwe emanzini abilayo (izingcezu ezi-3-4), oqoshiwe fake noma ugcotshwe. Isobho kungcono ukungasawoti. Pheka imizuzu engu-5 ukuya kwe-10, qiniseka ukuthi ungeza imifino ngemuva kokukhipha emlilweni.
Amasobho nesifo sikashukela. Ungasenza kanjani isobho sisize kwisifo sikashukela?
Ukusetshenziswa kwe-anyanisi eluhlaza kashukela kuyinto eyimpikiswano ezigulini eziningi ze-endocrinologist. Ukusebenza kwezokwelapha kuncike ohlotsheni lwemifino, izinga layo lokufutheka.
Ngefomu yayo eluhlaza, kungcono ukudla inani elincane le-anyanisi ngokudla noma izimpaphe eziluhlaza. Uma uzwa izinhlungu esiswini, umuzwa ovuthayo emathunjini, yeka ukwelashwa kwe-anyanisi ngokushesha.
I-anyanisi peo decoction
Ukulungiselela kulula. Kuzodingeka kuphela husk eyomile, ehlanzekile.
Thatha okumbalwa komkhiqizo bese uthatha ingxenye eyodwa.
Faka amanzi (izingxenye eziyi-10) bese ufudumele kubhavu wamanzi imizuzu eyi-15.
Isiphuzo esidingekayo kufanele sihlanzwa futhi siphuzwe engxenyeni yengilazi kabili ngosuku - ekuseni nakusihlwa ngokuqinile ngemuva kokudla.
Umhluzi uqinisa ushukela wegazi kuphela, kepha futhi uvamisa nomfutho wegazi. Ithuluzi libuye linconyelwe ukusetshenziswa uma umuntu ethuthukise i-IHD kanye / noma i-angina pectoris ngokumelene nesizinda sesifo sikashukela.
Ungayilungisa kanjani i-prophylactic
Ngohlobo 1 nesifo sikashukela sohlobo 2, isiguli sinconywa ukuba sidle u-anyanisi owosiwe. Futhi ubuningi bawo usuku lonke abunamkhawulo. Izindlela zokusebenzisa kwayo zilinganiselwe kuphela ngomcabango womuntu. Kusetshenziswa njenge:
njengesengezo enanini elikhulu lezitsha, kufaka phakathi zokudla,
iziphuzo kanye ne-tinctures ngokususelwa kuyo.
Kukholelwa ukuthi zonke izinto ezizuzisayo ze-anyanisi zivela lapho zibhaka. Ngesifo sikashukela, kuyalulekwa ukuthi unake iresiphi yama-tincture kusuka ku-anyanisi ebhakiwe. Kunezindlela eziningi zokupheka zokwenza ukumnika, kepha zilungiselelwe cishe ngendlela efanayo.
Usike u-anyanisi oqoshiwe ube imbiza. Amathini anele wamalitha ama-2. I-anyanisi ithululelwa ngamanzi abilisiwe abilisiwe.
Ingxube ephumayo ixubekile.
Ngemuva kwembiza nokuqukethwe okusele usuku osendaweni ebandayo, njengasesifrijini.
Ngosuku olulandelayo, i-tincture yokwelapha isilungele ukusetshenziswa. Ithathwa kathathu ngosuku isigamu sehora ngaphambi kokudla. Umthamo owodwa ngu-65-70 ml wokufakwa.
Ngaphambi kokuthi uphuze le ngxube, udinga ukufaka ithisipuni elilodwa leviniga yetafula kuyo.
I-tincture ebomvu ebomvu ifakazise umphumela wayo ekulweni noshukela. Ukulungiselela kufana nenketho yokuqala, umehluko kuphela wokuthi le wayini ebomvu isetshenziswa esikhundleni samanzi abilisiwe. Ingxube ye-anyanisi newayini kufakwa esiqandisini izinsuku eziyi-10. Ngemuva kokuthi ukumnika sekumi ngomumo, kudliwa isipuni ngemuva kokudla.
Inkambo eyodwa ngonyaka, eyenzelwe izinsuku eziyi-17, yanele ukuthi ushukela uhlale uvamile. Ngemuva kwezinyanga eziyi-12, isifundo singaphindwa uma kunesidingo. Lokhu kwelashwa kufanelekile kubantu abadala kuphela.
I-anyanisi iyithuluzi elihle kakhulu ekwelashweni okunesifo sikashukela okuyinkimbinkimbi, futhi futhi inengxenye ekuvinjelweni kwayo. Iqiniso ngukuthi iodine equkethe kulo iguqula izinqubo ze-metabolic, ilawula ukukhiqizwa kwama-hormone. IGlyconin yehlisa ushukela wegazi. Inhlanganisela yamavithamini namaminerali evamile amazinga kashukela wegazi, iqinisa amasosha omzimba nezivikelo zomzimba.
Njengokuvimbela izifo, ungasebenzisa umuthi olandelayo: wezipuni ezintathu zikabhontshisi oluhlaza, kanye namabhulebhu asikiwe. Inani elifanayo lejusi le-anyanisi elisanda kufakwa kufanele lifakwe kule nhlanganisela. Ukuqanjwa kugcwaliswa ngamanzi futhi kubilisiwe imizuzu engama-20. Umuthi uthathwa ubandwe ngamasipuni amathathu. okosuku.
EMoscow: isiteshi sikaMasipala iRiga, i-75 Prospect Mira St., i-bldg. 1, 2 floor, i-3 office
Ngosuku olulandelayo, i-tincture yokwelapha isilungele ukusetshenziswa. Ithathwa kathathu ngosuku isigamu sehora ngaphambi kokudla. Umthamo owodwa ukumnika kwe-ml.
Ngokusho kocwaningo oluningi, izidakamizwa eziqukethe izakhamzimba ezivela elukhunjeni lwe-anyanisi zinegalelo ekuzichithekeni kwamaseli womdlavuza ezinsolweni zengqondo, isifuba, i-Prost gland, amaphaphu kanye nekholoni.
Ukumiliselwa okusebenzayo kakhulu: thatha u-5 tbsp. l izinaliti zikaphayini oqoshiwe zalonyaka (isikhathi esivela entwasahlobo kuya ekwindla), 3 tbsp. rose okhalweni, 2 tbsp. l igobolondo le-anyanisi, uthele 1 litre wamanzi, upheke imizuzu eyi-10, uthele ku-thermos ebusuku. Ngemuva kwalokho phuza ingxube efudumele esikhundleni samanzi. Kuze kufike kumalitha ayi-1.5 wokumiliswa ngosuku.
Uma uhlushwa izifo zezinso, ezinjenge-nephritis, pyelonephritis, kanye ne-cystitis, zama i-decoction: 3 tbsp. l phisa ama-husks 2 tbsp. amanzi abilayo, gcoba imizuzu engama-35. Phuza 1 tbsp. l Izikhathi ezi-3-5 ngosuku.
I-anyanisi ikhasi libuye libe nezakhiwo eziningi eziwusizo. Ngenxa yesibabule, okuyingxenye yako, iyakwazi ukwehlisa kakhulu amazinga kashukela. Kulokhu, kusetshenziswa i-decoction ye-husk
I-decoction ye-husk ilungiswa ngendlela elandelayo. Isuswa isibani futhi igezwe kahle. Ngemuva kwalokho ibekwe epanini bese ithululelwa ngamanzi. Ama-husk alethwa kubilongwe futhi abiliswe ngomlilo ophansi imizuzu embalwa. Umhluzi olungiselelwe udakiwe ngendlela emsulwa noma ungezwe itiye.
Njengoba kunoshukela wanoma yiluphi uhlobo, u-anyanisi obhakwe ubhekwa njengesitsha esingenangozi kakhulu kubantu. Kodwa-ke, izici zomzimba wesiguli ngasinye kufanele zibhekwe. Kodwa-ke, ungaphuza amaphilisi ukwehlisa ushukela wegazi no-anyanisi, ngokuhlanganiswa kungaba yindlela ephumelela kakhulu.
Ukuphendula kule imifino kungabikwa kungacabangi futhi kuholele komzimba. Ngakho-ke, ngaphambi kokufaka u-anyanisi ekudleni, kufanele ubonane nodokotela wakho bese uwusebenzisa kuphela ukwehlisa ushukela kanye nesitsha.
Lapho ebuzwa ukuthi kungenzeka yini ukuphuza i-anyanisi ikhasi kushukela. Impendulo eqondile kungenzeka. Akukho okubangisana lapho kusetshenziswa ama-anyanisi husks. Ukuphela kwento okungenzeka ukuthi lokhu kungukubekezelela lo muthi womzimba nokusabela komzimba.
I-anyanisi eyomile ebhoboza i-grinder yekhofi. Ngemuva kwalokho 2 tbsp. hlanza i-100 ml yotshwala obuhlanjululwe ngesigamu ngamanzi. Faka endaweni emnyama nepholile izinsuku eziyisikhombisa. Sebenzisa amaconsi angama-20 angezwe ku-1 tbsp. l amafutha emifino ngaphambi kokudla. Isikhathi sokwelashwa singamaviki ama-2.
Ukuhlanzwa kubilisiwe phezu kokushisa okuphansi kuze kube yilapho ivolumu yenciphile. Hlunga nendawo endaweni epholile
Gaya i-husk bese uthela noma yimaphi amafutha emifino. Bayeke benze izinsuku eziyishumi nane nesine. Emva kwalokhu, ubunzima bese ubeka endaweni epholile, okungcono esiqandisini.
Gaya izihlanza ezomile zibe yimpuphu. Faka i-petroleum jelly noma ukhilimu wezingane ngesilinganiso 2: 3 noma 1: 3. Ithuluzi elinjalo lingasetshenziselwa ukubhucungwa umzimba.
Enye indlela yama-anyanisi ama-broths yimifino ebhakwe kanye negobolondo. Ukuze wenze lokhu, vele ubhake kuhhavini. Lesi sidlo sidinga ukudliwa amahlandla ama-3 ngosuku ngaphambi kokudla inyanga.
Ungasebenzisa i-foil ekuphekeni. Hlambulula anyanisi ezimbalwa bese usonga ku-foil. Beka kuhhavini imizuzu engama-20-30. Ngaso leso sikhathi kunokuningi okuthandayo phakathi nosuku. Kukholelwa ukuthi imifino ebosiwe noma ebilisiwe ayilahli izimfanelo zayo ezizuzisayo.
Ama-anyanisi abhakwe aqukethe i-allicin, enezindawo ezinhle kakhulu ze-hypoglycemic. Kepha ukuze lo mkhiqizo usize ekwelapheni isifo sikashukela, kuyadingeka ukuwusebenzisa njalo, ngoba ngokuwusebenzisa kanye, izinga likashukela egazini ngeke linciphe.
Isibabule sikhona ngokwakhiwa kwama-anyanisi abhakwe; siyabandakanyeka ngokugcwele ekukhiqizweni kwe-insulin emzimbeni. Iphinde ithinte kahle uhlelo lokugaya ukudla, yenza kube yilapho kukhiqizwa ujusi wesisu. I-anyanisi ebhakiwe ingadliwa njengesitsha esehlukile noma engezwe amasaladi noma izifundo zokuqala.
Ukubhaka u-anyanisi kuhhavini kushesha kakhulu futhi kulula:
I-bulb kumele igezwe futhi isikwe izingxenye ezi-4. Uma i-anyanisi incane, khona-ke ayinakusikwa.
Ngemuva kwalokho u-anyanisi ubekwa ekhasini lokubhaka elimbozwe nge-foil, usawoti omncane, ufafazwe ngamafutha omnqumo.
Ngaphambi kokuya kuhhavini, imbozwe olunye ungqimba lwe-foil.
Isikhathi sokupheka kufanele sibe cishe imizuzu engama-30. Ku-microwave, izobe isilungile ngemizuzu engu-15.
Umkhiqizo ophelile kufanele udliwe ngaphambi kokudla kuze kube izikhathi ezingama-3 ngosuku. Ukwelashwa ngama-anyanisi abhakwe kufanele kuhlale izinsuku ezingama-30, akufanele uphuthe ngosuku olulodwa. I-anyanisi ayibhakwa hhayi kuhhavini kuphela, lokhu kungenziwa futhi epanini, kepha kungakuhle ukuthi ungathothozi anyanisi. Amazambane ahlikiwe angenziwa kusuka ku-anyanisi abhakwe bese esebenza njengesitsha eseceleni sezitsha zenyama.
Ngempesheni ezinjengalezi, abanesifo sikashukela asebekhulile kuzodingeka babhake u-anyanisi futhi bonge kuphela. Akukona ngaso sonke isikhathi ukuthenga umuthi omuhle. Ngibonga izindlela zokupheka. Ngikubhala futhi kubhukwana futhi ngizokulisebenzisa.
Kumbuzo, kungenzeka yini ukuthi uphuze i-anyanisi ikhasi likashukela? Impendulo eqondile kungenzeka. Akukho okubangisana lapho kusetshenziswa ama-anyanisi husks. Ukuphela kwento okungenzeka ukuthi lokhu kungukubekezelela lo muthi womzimba nokusabela komzimba.
Gaya i-husk bese uthela noma yimaphi amafutha emifino. Vumela usuku lube usuku. Emva kwalokhu, ubunzima bese ubeka endaweni epholile, okungcono esiqandisini.
Ungasebenzisa i-foil ekuphekeni. Hlambulula anyanisi ezimbalwa bese usonga ku-foil. Beka kuhhavini. Ngaso leso sikhathi kunokuningi okuthandayo phakathi nosuku. Kukholelwa ukuthi imifino ebosiwe noma ebilisiwe ayilahli izimfanelo zayo ezizuzisayo.
Ukulimala kwe-anyanisi kanye ne-contraindication
I-anyanisi ebhakisiwe ayibonakali nganoma iyiphi i-contraindication, noma kunjalo, kubaluleke kakhulu ukuyisebenzisa ngamanani amancane ubhake kahle. Akunconyelwe kakhulu ukusebenzisa igama elibhakiwe ekudleni kulabo bantu abakhombe isilinganiso esithile sokungabekezelelani komkhiqizo.
Ama-anyanisi abhakwe akufanele kudliwe yibo bonke labo bantu abakhombe izinkinga ezahlukahlukene zesibindi. Kuhle futhi ukungasebenzisi i-anyanisi ebhakwe kakhulu ezifweni ezingathi sína noma ezinzima zohlelo lokugaya ukudla. Ngokuxilongwa okunjalo, ikhambi elilungile kunazo zonke kungaba ukusebenzisa umkhiqizo oboshiwe kancane.
Ngakho-ke, ukusetshenziswa kwama-anyanisi abhakwe kashukela kuvunyelwe, kepha ukuze uqiniseke ngalokhu, kuzoba ngcono ukubonana nochwepheshe. Kwezinye izimo, lokhu kumele kwenziwe amahlandla amabili noma ngaphezulu ukuze aqinisekise ukuthi yonke inkimbinkimbi yenkambo yokuvuselela inzima. Inzuzo ye-anyanisi iyonke ingabhekwa njengemvume yokusetshenziswa kwifomu elibhakwe kuphela, kepha futhi nokulungiswa kwama-tinctures, kanye nokusetshenziswa kwama-husks.
Ngezinkomba ezijwayelekile, u-anyanisi awulimazi abanesifo sikashukela. Noma kunjalo, khumbula ukuthi u-anyanisi wakhiwa ngenani elikhulu lamafutha abalulekile. Futhi imithamo ephezulu yokusetshenziswa ilimaza umzimba. Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukubheka umthamo futhi uthintane nodokotela wakho ngaphambi kokusebenzisa ukwelashwa u-anyanisi owelashayo.
Uma kwenzeka kweqa ngokweqile, ikakhulukazi ngendlela yayo eluhlaza, imiphumela elandelayo ingahle ivele:
ukucasulwa kwamapheshana emathunjini,
ukukhuphuka kwe-acid ejusi esiswini,
ukwehla kwesistimu yezinzwa,
Ukuvimbela lokhu, kunconywa ukushisa u-anyanisi. Lokhu kukuvumela ukuthi udambise umunyu, obangela ukusabela okungekuhle. Futhi ukuze ulondoloze inani eliphakeme lezakhi zomzimba, kuyadingeka ukubhaka u-anyanisi kuhhavini.
Contraindication ukusetshenziswa kwe-anyanisi eluhlaza:
i-gastritis ngesimo esibi,
ukwanda kwesifo somoya (asthma),
I-anyanisi husk yokugcoba
Ngokwesifo sikashukela ngenxa kashukela omningi wegazi, ukwehla kwezinqubo zokuvuselela isimo kuyinto ejwayelekile, ngakho-ke ngisho namanxeba amancane angalulama isikhathi eside kakhulu.
Ungasheshisa ukubuyiselwa kwesikhumba ngamafutha. Ithuluzi lilungiselelwe kanjena:
Hlanza futhi usule isikebhe kuze kufike flow,
thatha izandla ezimbili ezinkulu zomkhiqizo bese uzinqume kahle,
hlanganisa uthuli olukhona ne-baby cream noma i-petroleum jelly, uma kungenzeki lutho, khona-ke ungancibilika noma yimaphi amafutha.
Gcina amafutha esiqandisini, eshalofini eliseceleni. Umkhiqizo uvunyelwe ukusetshenziselwa ukwelapha amanxeba amade angalapheki, kanye ne-fungus pathologies. Ukusetshenziswa komkhiqizo akunqunyelwe ngesikhathi.
Ungaphuza kanjani i-anyanisi ikhasi likashukela futhi usebenzise amakhompiyutha alungiselelwe manje ayaziwa. Kepha udinga ukukhumbula ukuthi ukuthatha izidakamizwa ezinqunyiwe kanye nokubheka imithetho yokudla kokudla, ukwelashwa ngemikhiqizo ye-onion husk akubeki.
Izinzuzo nokulimala kwe-anyanisi ikhasi kushukela
Ama-pancreas noma ama-pancreas akhiqiza i-insulin, okuthi uma ihlanganiswa noshukela, ithunyelwe kumaseli. Umphumela wokugcina kufanele ube ukungena kweglucose kumaseli, kanye ne-insulin ohlelweni lokujikeleza kwegazi. Lapho umthelela omkhulu wemifino ugcwala emzimbeni, iba namandla amakhulu we-insulin egazini. Ngakho-ke, ama-decoctions we-anyanisi amakhasi asiza i-insulin ukuthi ingene emithanjeni yegazi. Ngaphezu kwalokho, ithuluzi elinjalo linemiphumela eminingi ezuzisayo emzimbeni:
Ine-iodine, okuholela ekutheni umzimba uzinze futhi ikhuthaza ukukhiqizwa kwama-hormone.
Ine-glyconin, ebhekele amazinga kashukela egazini.
Kukhona amavithamini kanye nefayibha, amafutha kanye nama-carbohydrate, amaprotheni namanzi.
Igqamisa isenzo sama-lymphocyte futhi inyusa ukukhiqizwa kwama-antibodies.
Ijwayelekile ibhalansi kasawoti wamanzi.
Ngabe ulimaza luphi lolu hlobo lwabantu? Singasho ukuthi umuthi onjalo awunangozi nakancane.
Kodwa-ke, kufanele kuphawulwe ukuthi ukwelashwa kwe-insulin nokudla akunakukhishwa. I-anyanisi ekhonkotha ngesifo sikashukela sohlobo 2 nezinye izinhlobo zesifo izoba ukwelashwa okwengeziwe kwisifo esibi kangako. Kuyadingeka futhi ukuzibandakanya nokuzivocavoca okukhanyayo okukhanyayo, ukuze ukwelashwa okuyinkimbinkimbi kunikeze imiphumela emihle kuphela.
I-anyanisi husk nesifo sikashukela: ezindleleni zokusebenzisa ikhambi labantu esivusa ukukhiqizwa kwe-insulin
Isifo sikashukela sikhula ngenxa yokuntuleka kwe-insulin ye-hormone emzimbeni, ngenxa yalokho okuqukethwe glucose egazini kufinyelela iphuzu eliyingozi. Ezimweni ezingavamile, i-pathology ayilapheki.
Esikhathini sikashukela, imisebenzi ye-metabolic yomzimba iyaphazamiseka, kanye nama-pancreas, anesibopho sokwenza i-insulin. I-insulin ilawula ushukela wegazi.
Lesi sifo sifaka ukonakala esimweni esejwayelekile somuntu, sithinta izinso, uhlelo lwezinzwa, izitho zombono, isikhumba. Njengamanje, izidakamizwa eziningi sezenziwe, kepha iziguli eziningi zithanda izindlela zokupheka zemithi yendabuko.
I-anyanisi ikhasi lithandwa kakhulu yisifo sikashukela, esithanda ukuncipha koshukela. Ngaphezu kwezakhiwo zayo eziwusizo, imikhiqizo ye-onion husk kulula ukuyilungiselela, futhi u-anyanisi uthengiswa unyaka wonke ezitolo, kuyilapho ugcina inani lentengo elingabizi kuwo wonke umuntu.
Izinzuzo zika-anyanisi azinakuphikwa. Kepha i-husk yayo muva nje yaqala ukusetshenziswa ukwelapha izinqubo eziningi ze-pathological. Ukutadisha ngokucophelela ukwakheka kwama-anyanisi peelings kwaholela ososayensi ekutholakaleni kwangempela: lokho okwatholakala iminyaka eminingi njengokudoti empeleni kungudokotela wemvelo. Ukwakheka kwe-husk akuyona neze indlela ephansi komnsalo, futhi kuyedlula ngisho nasezingxenyeni zayo.
Ngakho-ke, ukwakheka kwamakhemikhali komkhiqizo:
I-quercetin iyi-antioxidant enamandla ne-bioflavonoid yemvelo yemvelo,
Ama-phytoncides ama-antiseptics wemvelo alwa ngempumelelo nokuvuvukala okuyi-purulent kanye ne-pathologies yohlelo lokuphefumula,
amavithamini: A, B, C, E, P, PP,
ukulandelela izinto: potassium, iron, phosphorus, isibabule, njll.
I-anyanisi ikhasi likashukela uhlobo 2 lwesifo sikashukela nohlobo 1 kungumkhiqizo odingekayo. Akugcini nje ngokunciphisa ukugcwala kweglucose egazini, kodwa futhi kuvuselela umzimba ukukhiqiza i-insulin yayo. Ungasebenzisa umkhiqizo nsuku zonke.
I-anyanisi ikhasi ku-2 nohlobo lwe-1 sikashukela kungaba umuthi wemvelo futhi osebenzayo.
Izici ezilandelayo ezinhle zomkhiqizo ziyaziwa:
eletha umzimba ithoni,
Ukuqinisa izindawo zokuvikela umzimba,
umphumela oyisisisekelo ohlelweni lwezinzwa,
ukuqinisa isitsha segazi,
ukwenziwa ngokwejwayelekile kwe-hematopoiesis,
ukushesha kokuhlinzekwa kwegazi,
Ukuhlanza nokuqinisa izinso,
ukugqugquzela ukukhiqizwa kwe-insulin yabo uqobo,
ukuvimbela ukubonakala kwamachibi e-cholesterol kanye nokushayisana kwegazi,
Ukwenza kube lula ukunyakaza kwamathumbu,
ukwelashwa kwezifo zokukhunta
ukuzinza kwezinqubo ze-metabolic,
ukuhlinzeka ngomzimba ngezinto eziwusizo.
Ngokusekelwe kokungenhla, kuyacaca ukuthi i-anyanisi ikhasi linezici ezilandelayo zokwelapha:
Utshwala namanzi akhipha i-anyanisi ikhasi ahlangabezana ngempumelelo nama-pathologies amaningi. Uma uphuza itiye kuyo ngokwezifiso, ungazivikela ezifweni zegciwane. Ngosizo lwayo, izinkinga zobulili zabesilisa kanye nanoma yikuphi ukutheleleka kwendawo yomlomo kuyelashwa.
Akufanele uqale usebenzise amakhambi abantu ngaphandle kokuthinta uchwepheshe kuqala. Udokotela ofanelekayo uzonquma umthamo owusizo futhi awuvikele emiphumeleni emibi.
Ukuze i-anyanisi ikhasi likushukela likwazi ukuletha inzuzo ephezulu, kufanele uthathe ngokungathí sina ukulungiswa kwezinto ezingavuthiwe ukuze uqhubeke usebenzise. Izitshalo ezimpande ezivela engadini yakho kufanele zikhethwe, ukuze ungabeki ubuthi emzimbeni ngamanyolo wamakhemikhali. Kuyaziwa ukuthi zonke izinto ezinobungozi kubantu, ezisetshenziswa ngabalimi, ziqwabelana ngokunembile emathangeni anyanisi.
Amaphuzu afanele ukunaka:
u-anyanisi kufanele womiswe futhi wesulwe ngengubo yendwangu eyomile,
Susa izikali ngokucophelela uzifake esitsheni. Isigaxa esivuniwe sigcinwa egumbini elinomoya omncane elinomswakama ophansi,
Ngaphambi kokusebenzisa, ama-flakes kufanele agezwe ngaphansi kwamanzi ampompo,
Ungawusebenzisi umkhiqizo ngamachashazi, umkhondo wokubola nezinye izimpawu zesifo.
Ukuze uqinise imisebenzi yokuvikela umzimba futhi uthuthukise impilo yakho, kwanele ukuphuza inkomishi yetiye kusuka kusihlwa so-anyanisi njalo ekuseni.
Ngemuva kwamasonto ambalwa ukusebenzisa lo mkhiqizo, uzizwa engcono, izinwele zakho zikhanya, namazinyo akho namazipho kuqina.
Umuntu unokuqina kokuqina, athuthukise imizwa nokusebenza.
Iresiphi: Hlambulula 1 tbsp. l husks emanzini agobhozayo bese ubeka i-teapot. Thela u-200 ml wamanzi abilayo bese ushiya imizuzu engama-26. Cindezela futhi uphuze ngaphandle kokufaka ushukela.
Ungasebenzisa uju njenge-sweetener, kepha ungayengezi ekufakweni okushisayo, kepha kusebenzise ukuluma ukugcina izakhiwo ezizuzisayo zomkhiqizo weenyosi.
I-tincture ukwehlisa ushukela wegazi
Ukufeza umphumela ohlala njalo, udinga ukuphuza i-decoction of anyanisi flakes nsuku zonke, isikhathi eside.
Iresiphi: Udinga ukuthatha idlanzana lama-husk eligeziwe bese ulibeka epanini. Thela 200 ml wamanzi bese upheka imizuzu engu-15. Songa imizuzu engama-20.
Cindezela, gazinga ikhekhe futhi uphuze kabili ngosuku, 100 ml ngemuva kokudla. Ukuthuthukisa ukunambitheka kwesiphuzo, ungangezela ithebhulethi le-sweetener.
I-anyanisi tincture yesifo sikashukela sohlobo 2 ithathwa izinsuku eziyi-14. Ngemuva kwalokho, ngemuva kwezinsuku eziyi-10, phinda inqubo. Ebantwini abathathe le tincture, ushukela wehlile futhi wabuyela kokujwayelekile.
Iresiphi: Thatha i-husk elungiselelwe bese uyigaya ku-grinder yekhofi. Thela esitsheni sobumba 2 tbsp. l impuphu eholelekile bese uthela ingxenye yengilazi yevodka noma yotshwala.
Mboza futhi uhlanze endaweni emnyama izinsuku eziyi-7. Cindezela bese uqala ukwelashwa. Phuza amaconsi angama-20 esi sidakamizwa esihlanganiswa namafutha yemifino kathathu ngosuku ngaphambi kokudla.
Isifo sikashukela, izifo zesikhumba zivame ukuvela. Lokhu kungenxa yokwehla kwamakhono okuvuselela kabusha.
Ngisho isilonda esincane singakhula sibe ukuwohloka okungathí sina futhi senze impilo yomuntu ibe nzima. Ukusheshisa ukwelashwa, kunconywa ukusebenzisa i-oyili elikhethekile.
Iresiphi: Hlanza ama-husks, womile bese ugaya ku-grinder yekhofi enezandla ezimbili zezinto ezingavuthiwe.
Hlanganisa i-powder ephumayo ne-petroleum jelly bese ubeka esitsheni sengilazi. Gcina esiqandisini emnyango. Gcoba noma yiziphi izilonda zesikhumba kushukela kuze kuphole ngokuphelele.
Ngisho nekhambi elilusizo njengalokhu ukumiliselwa linokuphikisana okuningi. Kufanele uwatadishe ngokucophelela ngaphambi kokuthi uqale usebenzise lo muthi wokunye umuthi. Lesi silinganiso sizogwema zonke izinhlobo zokuwohloka kwempilo kanye nenhlala-kahle.
Ngokwezigaba awukwazi ukuthatha umuthi ezimweni ezinjalo:
i-gastritis, isilonda sesisu, i-pancreatitis nezinye izinkinga zesisu,
ukusabela kokungezwani nama-anyanisi,
I-pyelonephritis ngesikhathi sokuqhuma,
ngegazi elikhulu kakhulu
Ukuphuza utshwala ngesikhathi sokwelashwa nge-anyanisi husks akwamukeleki.
Uma ugqithisa ukusetshenziswa kwe-ukumnika, ungathola lezo zimo zesimo:
ukukhuphuka kwe-acidity yejusi esiswini,
umfutho wegazi ophakeme (umfutho okhuphukile),
Kubalulekile ukwazi! Izinkinga ezinamazinga kashukela ngokuhamba kwesikhathi kungaholela ekutheni kube nezixuku zonke zezifo, njengezinkinga ngombono, isikhumba nezinwele, izilonda, i-gangrene kanye namaqhubu omdlavuza! Abantu bafundise okuhlangenwe nakho okubabayo ukuguqula amazinga abo kashukela ajabulele ...
Ungapheka kanjani futhi uphuze kanjani u-anyanisi ikhasi nesifo sikashukela? Izimpendulo kuvidiyo:
Izindlela ezinama-anyanisi amakhasi kulula ukuzilungiselela ngokwazo, futhi ungathenga u-anyanisi nganoma yisiphi isikhathi sonyaka. Ukuzelapha ngokwakho akwamukeleki kushukela, ngakho-ke kufanele uqale uthole izeluleko zikadokotela. Futhi ukwelashwa kwe-anyanisi husks sikashukela kufanele kwenziwe kanyekanye nokwelashwa okuyinhloko.
I-anyanisi ikhasi lesifo sikashukela mellitus 2: decoction ukunciphisa ushukela
I-anyanisi ikhasi ngo-2 sikashukela kunciphisa ushukela wegazi, futhi ngenxa yezakhi zamavithamini nezakhi zamaminerali eziqukethwe kuwo, kuqinisa umzimba, kunomthelela we-tonic and restorative.
Cishe wonke umuntu uyazi ngezici zokwelapha zika-anyanisi. Isetshenziselwa umuthi wendabuko kanye nowendabuko ekwelapheni izifo zomkhuhlane kanye nezifo zokuphefumula, futhi inezinto ezilwa nokuvuvukala nezinxeba zokupholisa amanxeba.
Kepha bambalwa abantu abazi ngezindlela zokwelapha ze-anyanisi ikhasi. Muva nje, ngemuva kokutadisha ngokucophelela ukwakheka kwe-biochemical of husks kusuka ku-anyanisi, kwenziwa iziphetho ngokuzuzwa kwayo ngokungangabazeki kubantu.
Ukwelashwa kwama-anyanisi husks sikashukela kuyindlela ephumelelayo yokubhekana noshukela ophezulu wegazi, ukuqeda izinkinga ezingaba khona kulesi sifo esiyisisekelo, futhi ugweme ukwanda kakhulu enkambisweni ye-pathology.
Kuyadingeka ukuthi ucabangele izinzuzo ze-anyanisi ikhasi kushukela sikashukela, futhi ingabe inemiphumela emibi yokuphikisana? Yikuphi ukupheka okususelwa ku-anyanisi amakhasi kungenziwa ekhaya, futhi ungakupheka kanjani?
I-anyanisi yesifo sikashukela sohlobo 2: kungenzeka ukuthi udle u-anyanisi obhakwe?
Uma kwenzeka ngokungasebenzi kahle kwe-gland yegilo, akwenzeki kuphela, kodwa kuyadingeka ukufaka u-anyanisi ekudleni. Yidla imifino nganoma yiluphi uhlobo: okuluhlaza noma okushisa ukushisa. Ngezinhloso zokwelapha, i-pulp ye-fetus ne-husk iyasetshenziswa.
I-anyanisi yehlisa izinga loshukela egazini, inomthelela ekwenzeni i-insulin yemvelo. I-GI yesitshalo sezimpande amayunithi ayi-15, okuqukethwe kwekhalori ngu-40-41, AI -25.
Ngalesi sizathu, u-anyanisi ufakwa kwimenyu nsuku zonke, ngaphandle kokwesaba ukulimaza impilo yesifo sikashukela.
Njengomuthi, basebenzisa u-anyanisi ojwayelekile kanye nezinhlobo ezinemibala eminingi emnandi ngokunambitheka: zibomvu, ziluhlaza okwesibhakabhaka, zimhlophe. Ukusuka kuzaladi wesaladi kungcono ukupheka izifundo zesibili nezokuqala, ama-decoctions kanye ne-infusions - kusuka kuma-turnips.
Kubalulekile! Imenyu yokwelashwa kwesifo sikashukela ixhomeke ezingeni likashukela wegazi yamanje kanye nempilo ejwayelekile. Uma unesifo sokuqaqamba kwesisu, i-acidity, ukuhlaselwa kwe-pancreatitis, awukwazi ukuncika u-anyanisi eluhlaza.
Izinzuzo ze-anyanisi kushukela
I-anyanisi kanye ne-chives kuthinta kahle umzimba wonke ngenxa yokuqukethwe okuphezulu kwamavithamini, usawoti, i-calcium, i-phosphorus, i-organic acid nezinye.
Izakhi ezisebenzayo zemifino zisebenza izinkomba eziningana ngasikhathi sinye:
Yehlisa amazinga kashukela egazini.
Amafutha angama-subcutaneous ayashiswa, esiza ukwehlisa isisindo.
Ukugqugquzela ukukhiqizwa kwe-insulin.
Qinisa umsipha wenhliziyo obuthakathaka.
Thuthukisa ukuhamba kwegazi ngokunciphisa i-cholesterol.
Qinisa izindonga zemithambo yegazi.
Ungathathi hlangothi amagciwane.
Hambisa umzimba ngamavithamini, amaminerali.
I-Natural metabolism yamanzi
Buyisela indlala yegilo.
Vikela kuma-neoplasms, isimila somdlavuza.
Ungafunda kabanzi ngezinzuzo ze-anyanisi kushukela ngokubuka ividiyo:
I-anyanisi - ukwelashwa kwesifo sikashukela. Ungaphatha kanjani u-anyanisi weshukela 2 zokupheka
Ungayisebenzisa kanjani anyanisi yesifo sikashukela sohlobo 2
Ukwelashwa kwezifo ze-endocrine kwenziwa ngokuphelele. Awukwazi ukusebenzisa umuthi wendabuko kuphela. Isifo sikashukela sidinga ukulandela ukudla kwansuku zonke, ukuhamba kakhulu, ukuphuza imishanguzo.
Umphumela omuhle ovela ku-anyanisi ukwelashwa utholakala kancane kancane, kuphela ngokusetshenziswa okujwayelekile, ukufakwa nsuku zonke kwezitsha ezinemifino ekudleni. Ukusebenza kokulashwa kuncike ekulungiseleleni anyanisi. Isibonelo, imifino eluhlaza iqukethe izakhamzimba eziningi, kepha ukunambitha okumunyu, kungadala ukucasuka kwamathumbu nesisu.
Kulokhu, isivuno sezimpande sibilisiwe, sibhakwe noma sithosiwe. U-anyanisi oluhlaza udliwa eluhlaza. Futhi ayisebenzi kuphela kwabanesifo sikashukela, kodwa futhi kubo bonke abantu ukuthuthukisa ukuhamba kwegazi, amadoda angenamandla ngenxa ye-zinc.
Ukulungiselela ama-infusions, ama-decoctions noma izitsha nge-anyanisi, sebenzisa izithelo ezintsha kuphela. Zigeze kahle ngaphansi kwamanzi ashisayo. Ukuze unciphise ukufutheka, uthele amanzi abilayo phezu kwawo.
Kubalulekile! Ngokwezincomo zama-endocrinologists, enye inkambo yokwelashwa kwe-anyanisi ayanele. Phinda njalo ezinyangeni eziyisithupha ukuze ube nempilo enhle. Umthamo we-infusions, izitsha ngosuku, isikhathi sokwelashwa kungcono ukuxoxa nodokotela wakho.
Ishukela Onion Ungadliwa
Ungapheka u-anyanisi obhakwe ku-microwave, kuhhavini, noma epanini. Isici sale ndlela yokwelashwa ukuthi imifino ebhakiwe ayilahli i-allicin, okudingekayo ukwehlisa ushukela wegazi. Khetha indlela elula kakhulu yokubhaka:
Sika i-anyanisi ehlutshiwe ngosayizi omncane zibe izingxenye ezimbili noma ezine, usawoti. Bhaka, usonga ku-foil, kuhhavini imizuzu engama-25-30. Kungcono ukudla imifino elungiselelwe ngaphambi kokudla izikhathi ezingama-3-4 ngosuku ngenyanga.
Kuhovini we-microwave, bhaka u-anyanisi okwemizuzu engu-15 ngaphandle kwephepha le-aluminium, kufafazwe kancane ngamafutha, kungcono umnqumo. Thela imifino yezimpande ngaphambi kokudla ngakunye okungenani izinsuku ezingama-25-30.
Epanini, u-anyanisi udinga ukuphekelwa kwifomu eli-peeled ngaphandle kwamafutha. Kukhona ngokusho kwesikimu esingenhla.
Ama-bulks anama-husk angabhakwa ekhasini lokubhaka kuhhavini, engeza amanzi amancane nosawoti. Imifino yezimpande ihlanzwa ngaphandle kokhilimu, ngaphandle kokusikwa kube izingxenye. Uma u-anyanisi incane, yidla ukudla okuphelele okungama-1-2 amahlandla ambalwa ngosuku.
Ama-anyanisi abhakwe yisifo sikashukela abhekwa njengempumelelo kakhulu futhi aphephe kakhulu ekwelashweni kwesisu sakho.
Ungathosa u-anyanisi njengesitsha esisehlangothini sezitsha zenyama noma ungeze njengesithako esengeziwe kuzinhlamvu, kumaladi akhanyayo.
Buckwheat iphalishi no-anyanisi othosiwe. Ngemuva kokulungisa okusanhlamvu, chitha amanzi amaningi bese ubeka indishi eseceleni epanini. Faka ibhotela, u-anyanisi oqoshiwe kuyo. Fry ingxube kuze kube yilapho imifino isilungile. Ukuze uthuthukise ukunambitheka, ungangeza unamathisela utamatisi, izaqathe ephalishi.
I-anyanisi cutlets. Imifino enezimpande ehlanganisiwe inqunywe kahle, izingcezu ezi-3 zizokwanela ama-cutlets amabili. Hlanganisa imifino namaqanda (ama-3 ama-PC.), Usawoti, upelepele. Bopha ngofulawa wokuqina kwabantu. Kufakwe epanini elinamafutha zemifino. Ngo ushukela ophansi, ungadonsa ama-cutlets neminye imifino ngemuva kokuthosa, wenze isoso se-utamatisi.
Kubalulekile! Akufanele usebenzise kabi u-anyanisi othosiwe. Kulimaza umgudu wokugaya ukudla, uqukethe amakhalori amaningi kunenguqulo ebhakiwe.
Anyanisi abilisiwe kashukela
Ividiyo enemininingwane yokuthi ungenza kanjani isobho lesifo sikashukela enempilo ingatholakala lapha:
U-anyanisi oluhlaza okwesibhakabhaka sohlobo 2 sikashukela
I-anyanisi eluhlaza ungangezwa kumasaladi, amasobho ngemuva kokulungiselela kwabo. Hlanganisa nosawoti kanye namafutha zemifino, ukhonza njengesitsha esisehlangothini kuma-cutlets, inyama.
I-Baking leek yesifo sikashukela ayinconywa. Ilahlekelwa inani elikhulu lezakhiwo eziwusizo.
Ukusuka kwimifino engeyona eyendabuko yetafula laseRussia, lungisa amasaladi ngamafutha zemifino, ufafaze amakhambi amasha ngomhluzi wenyama, amasobho, izitsha eziphambili.
Ungafinyelela umphumela omkhulu wokwelashwa kwe-anyanisi ngokwenza i-tincture ewusizo yemifino.
Kunezindlela zokupheka eziningana:
Imifino engcolile - izingcezu ezi-3, ezibhakwa kuhhavini nge-husk. Imifino elungele ukuhanjiswa idluliselwa embizeni. Thela kancane amanzi abilisiwe, kodwa akhokhoziwe. Amahora angama-24 agcizelela esiqandisini, esela. Udinga ukuphuza izikhathi ezi-3 ngosuku, ama-80-100 ml ngaphambi kokudla. Inkambo yokwelashwa ihlala amasonto amabili. Bese uthathe ikhefu lezinyanga ezintathu.
Ukumiswa kwe-anyanisi ewayinini. Ihlise kahle i-glucose kuma-diabetes. Ukupheka, thatha anyanisi amancane -304 izingcezu. Thela iwayini elibomvu elomile - 400-450 ml. Faka imbiza esiqandisini izinsuku eziyi-10. Phuza i-10 ml ngaphambi kokudla kuze kuqede umuthi.
Kubalulekile! Musa ukusebenzisa izindlela zokuphuza utshwala ukwelapha izingane. Khetha ama-tincture emanzini noma kuma-decoctions.
Ama-decoctions e-husk ayasebenza ekukhuphuleni ushukela oshukela. Ilungiselelwe kalula:
I-peel ehlanzekile ye-anyanisi isemhlabathini ngesikele, ummese.
Thatha u-1 tbsp. l isithako esiyinhloko ku-100 ml wamanzi.
Faka ingxube epanini.
Kufakwa kubhavini lwamanzi nokufudumeza. Musa ukuletha ikhambi kubilise.
Ipholile, gcizelela enye 1-1, 5 amahora.
Phuza inkomishi engu-1/2 izikhathi ezimbili ngosuku ngaphambi kokudla okungenani inyanga.
I-anyanisi isithako esilula nesijwayelekile kithi sokupheka cishe zonke izitsha. Ngaphezu kokunambitheka okuhle kakhulu, u-anyanisi unezindawo zokuphulukisa zokwelashwa kwesifo sikashukela kanye nokugcinwa kwesimo esivamile esimweni esijwayelekile. Ungasebenzisa imifino eluhlaza futhi eyenziwe ngomumo. Lokhu akuphazamisi ukusebenza kwawo. Kubalulekile ukubheka isilinganiso futhi ulalele izincomo zabodokotela.
Igama lami ngingu-Andrey, sengibe yisifo sikashukela iminyaka engaphezu kwengu-35. Ngiyabonga ngokuvakashela isiza sami. Diabei mayelana nokusiza abantu abanesifo sikashukela.
Ngibhala izindatshana ezikhuluma ngezifo ezahlukahlukene futhi ngikweluleke abantu baseMoscow abadinga usizo, ngoba emashumini amaningi empilo yami ngibone izinto eziningi kusuka kulokho uqobo, ngazama izindlela eziningi nemithi eminingi.
Ngalo nyaka we-2018, ubuchwepheshe bukhula kakhulu, abantu abazi ngezinto eziningi ezisunguliwe okwamanje ngempilo ntofontofo yabanesifo sikashukela, ngakho ngathola inhloso yami futhi ngisize abantu abanesifo sikashukela, ngangokunokwenzeka, baphile kalula futhi bajabule.